Ukugezwa – The Ulwazi Programme
Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe
Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe … Read more
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Cleansing Ceremony, Death, Imicimbi yesintu, Izinkolelo zesintu, Traditional Beliefs, Traditional Ceremonies, Traditional customs, Ukufa, Ukugezwa
Ukuqanjwa Nokugqokiswa Kwengane Engasekho
Kunemikhuba elandelwa noma eyenziwa ngabantu ngenxa yezinkolelo zabo ezintweni ezithile. Lemikhuba isikhathi esiningi abantu bayiphambanisa noma bayibiza ngokuthi amasiko abo. Lapha sikhuluma noma sibheka umkhuba wokuqanjwa kwegama nokugqokiswa kwengane eseyadlula emhlabeni. Lomkhuba ujwayeleke ukuthi wenzelwe ingane eshone ingakazalwa noma kuphuphume isisu. Lokhu kwenziwa ngabantu abasuke benezinkinga base befuna usizo lwabantu ababonayo balulekwa ngokuthi kufanele benze … Read more
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Cleansing Ceremony, Traditional customs, Ukugezwa
Umfelokazi umuntu wesifazane osuke eshonelwe ngumyeni wakhe owamlobola ngezinkomo wagcagca. Ziningi izinto azihloniphayo noma azigwemayo ukuze angadlebeleki noma angadluli uma kusashoniwe, njengokuya ensimini ezilile nokungena esibayeni nenzilo noma ukuya emfuleni emini, umama ozilile uya emfuleni noma emthonjeni selithambeme ilanga. Uma kuhlangene abantu bebaningi endaweni eyodwa njengasesontweni uhlaliswa ngemuva noma ekugcineni ngoba akufanele kubekhona umuntu ngemuva … Read more
Makhosazana Mdabe Ziningi izindlela abantu abazilandelayo uma kukhona umuntu odlulile emhlabeni noma oshonile. Lezindlela zihlukene ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi njengamaKrestu alandela eyawo indlela, aMaNazaretha nawo alandela eyawo kanye nabanye abantu. Contents 1 Uma Kukhotheme Inkosi 2 Uma kushone umuntu(kazana) 3 Ngosuku lomngcwabo 4 English Summary Uma Kukhotheme Inkosi Ngosiko laKwaZulu akushiwo ukuthi inkosi ishonile kuthiwa … Read more